नेकपामा संगठन विभागको नेतृत्व टुंगियो, कुन नेताले के जिम्मेवारी पाए ? (नामावली) - शैली न्युज
नेकपामा संगठन विभागको नेतृत्व टुंगियो, कुन नेताले के जिम्मेवारी पाए ? (नामावली)
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १८:५०
नेकपाले पार्टीका विभिन्न विभागको नेतृत्व टुंग्याएको छ । आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पार्टीका ३३ विभागको नेतृत्व टुंगो लगाएको हो ।
नेकपाभित्र रहेका ३३ मध्ये १९ विभागमा पूर्वएमालेका नेताहरू र १४ मा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन् । नेकपामा शक्तिशाली मानिएको स्कुल विभागको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पाउनुभएको छ ।
स्कुल विभागमा यसघि सहमति जुट्न नसक्दा नेकपाको सचिवालय बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो । स्कुल विभागमा मन्त्री पोखरेलसहित प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल र बेदुराम भुसालले दाबी गर्दै आएका थिए ।
यस्तै सचिवालय सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ भने राम कार्कीलाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । नीति तथा प्रतिष्ठान विभागको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पाउनुभएको छ ।
त्यस्तै नेता वामदेव गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाइएको छ । पार्टी प्रवक्तासमेत रहनुभएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचार विभागको जिम्मा दिएको छ भने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थ तथा योजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ ।
१४ महिनाअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा विभागहरूको नेतृत्व टुंगो नलाग्दा एकता प्रक्रिया अल्झिएको थियो ।यसैबीच, नेकपाले सातवटा प्रदेश कमिटीमा सह–इन्चार्ज थप गरेको छ ।
आज बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेशमा दुई–दुई सह–इन्चार्ज थप गरेको हो ।
थपिएका सहइन्चार्जहरुमा प्रदेश १ मा शेरधन राई र नरेश खरेल, प्रदेश २ मा नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवान, प्रदेश ३ हितमान शाक्य र काशीनाथ अधिकारी, गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ र यशोदा सुवेदी गुरुङ रहेका छन् ।
यस्तै, प्रदेश ५ मा वैजनाथ चौधरी र कुलबहादुर केसी, कर्णाली प्रदेशमा कालीबहादुर मल्ल र प्रकाश ज्वाला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खगराज भट्ट र भानुभक्त जैसी सह–इन्चार्ज थपिएका हुन् ।
हेर्नुहोस् कुन नेताले पाए जिम्मेवारी ?
काँग्रेस एकता सुरुवातको परिणाम उपनिर्वाचनबाटै देखिनु पर्छ: सभापति देउवा
पत्रकार रवि लामिछानेलाई पाँचदिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने